Warshadda Daboolka Qalliinka | Soo-saareyaasha iyo Qanjidhada Kaabista Qalliinka Jumlada
Dhaqtarka Laastikada Oo La Dabacsan Yihiin Guud ahaan Madaxa Lagu Tuuri Karo + pe Cap Cap
Koofiyadda buluugga ah ee buluugga ah waxay ka samaysan tahay pe + pe, waxaana jira xarig la isku hagaajin karo oo ku yaal dhabarka badeecada, taas oo lagu hagaajin karo iyadoo loo eegayo qaababka kala duwan ee madaxa dadka. Sheyga waa mid neefsan kara oo raaxo leh, ku habboon in loogu isticmaalo isbitaalada, rugaha caafimaadka iyo meelaha kale
Qalliinka la tuuro ee qashinka qashinka lagu nadiifiyo ee shaqada koofiyad bilaash ah
Koofiyadan qalliinka ee la tuuri karo oo cad ayaa laga sameeyay maadada polyester-ka, oo leh caabbinta wanaagsan ee biyaha waxayna si wax ku ool ah u ilaalin kartaa madaxa dhakhtarka. Faashadda laastikada waxay si fiican ugu habboonaan kartaa wareegga madaxa ee dhammaan noocyada dadka. Waxay ku habboon tahay isbitaallada iyo bukaan socod eegtada. , Xarunta caafimaadka, iwm.
Iibinta Tooska ah ee Warshadda oo aan ku Xidhnayn buluug buluug ah oo la tuuro
Koofiyad la tuuri karo oo ka samaysan dhar aan tolmo lahayn, wax neefsanaya oo raaxo leh, oo ay weheliso naqshad laastik ah oo la hagaajin karo, waxay ku habboonaan kartaa qaabka madaxa dadka badankiisa, badeecaddu waa mid aan boodh lahayn oo neefsan karta, waxaana lagu dabaqi karaa muuqaallo badan, sida warshado iyo aqoon isweydaarsiyo, Bakhaarka, safarka, iwm.